September 2017 - Sawirrotv
Saldhiga Turkiga ka Furay Soomaaliya (VIDEO)
Saldhigaan ayaa lagu waday in uu xariga ka jaro Madaxweynaha Soomaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), balse waxaa maanta xariga ka jaray Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre. VIDEO – 1 Saldhigaan ayaa dhawaan lagu xareyn doonaa ilaa 1,500 askari, iyadoo halkaasi oo lagu tababari doono, Saraakiil ka socota dalka Turkiga ayaa ka qayb …
Dowladda Sacuudiga oo Diyaarad Qaas ah u soo Dirtay Madaxweyne Farmaajo (SAWIRRO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo talaado ah u ambabaxay dalka Boqortooyada Sucuudi Carabiya. Madaxweynaha ayaa la sheegay in uu Casuumad ka helay Boqorka dalka Sacuudiga, isla markaana uu Diyaarad qaas ah u soo diray, Safarkan shaqo oo qaadanaya muddo labo maalmood ah ayaa Madaxweynaha iyo wafidigiisu ay ku …
Madaxweyne Farmaajo oo Kulan la Qaatay Ururrada Bulshada Rayidka (SAWIRRO)
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kulan talo-wadaag ah la qaatay qaar kamid ah Ururrada Bulshada Rayidka ah ee ka dhisan dalka. Wadatashigan oo lagu xoojinaayey xiriirka wadashaqayneed ee Urrurada Bulshada iyo dowladda, ayaa xubnaha ka socday Bulshada Rayidka ah waxa ay u soo gudbiyeen Madaxweynaha talooyinkooda ku aaddan dib-u-habaynta garsoorka, dib-u-eegista dastuurka, …
Diyaaradii Ugu Horeysay Mudo 25-Sano Kadib Xalay ku soo Degtay Garoonka Aadan Cadde (VIDEO)
Diyaaraddii ugu horeysay oo rakaab sidamudo 26-sano kadib ayaa waxay xalay soo cago dhigatay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho. Diyaaradan oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Jubba Airways ayaa waxay siday 200 ruux oo rakaab ah kuwaasi oo ay ka soo qaaday dalka Sacuudi Carabiya, una badnaa Xujey soo xajisay. Xilligii ay diyaaraddu ka …
Diyaaraddii ugu Horeysay oo Rakaab Sida (VIDEO)
Diyaaradan oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Jubba Airways ayaa waxay siday 200 ruux oo rakaab ah kuwaasi oo ay ka soo qaaday dalka Sacuudi Carabiya, una badnaa Xujey soo xajisay. Diyaaradani ayaa noqoneysa diyaaraddii ugu horeysay oo rakaab sida oo xilli habeen ah ka soo degata Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, wixii ka …
Madaxweynihii Hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo Dhaleecayn u soo Jeediyay Dowladda
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed, ayaa ku baaqay in Dowladda Somaliya ay dib uga fiirsato xiisadda u dhaxeyso xulufada Sacuudiga iyo Dowladda Qatar. Madaxweynihii hore ee Somaliya ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay shabakadda bulshada xiriirisa ee Facebook ku sheegay in go’aanka dhexdhexaadnimada ee Dowladda Soomaaliya ay qaadatay uu …
Madaxweynaha maamul Goboleedka Jubbaland Mudane, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa booqday Xuduudka Soomaaliya iyo Kenya kala qaybisa ee Magaalooyinka Beledxaawo iyo Mandheera, isagoo sidoo kalena booqday halka ay Dowlada Kenya ka dhisayso darbiga mudooyinkii lasoo dhaafay uu muranku ka taagnaa. Kenya ayaa sheegtay inay darbigan kaga gol leedahay inay isaga yareyso weerarada Ururka Al …
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Maanta Xariga ka Jaray Carwada Buugaagta ee “Mogadishu Book Fair” (SAWIRRO)
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane, Xasan Cali Khayre ayaa maanta xariga ka jaray Bandhigga Caalamiga Buugaagta (Mogadishu Book Fair) kaasi oo lagu qabtay Magaalada Muqdisho. Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo khudbad u jeediyey dadkii ka soo qaybgalay bandhiggan, ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay ku jiraan dad leh hal abuurka ay aqoontooda ku gaarsiin karaan …